August 19, 2019 admineBooksLeave a Comment on TAFSIIR SHEEKH CUMAR FAARUUQ FREE DOWNLOAD
Shaafici Xaaji Cabdi-Suldaan iyo Sh. Qaybta Sarfiga waxaa u akhriyey wadaad awowgiis ah oo la oran jirey Xaaji Maxamuud Xaaji Cabdulle, Tafsiirka waxaa u khriyey wadaad la dhihi jirey Sh. Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub. Ka dibna isagaaba macallin-dugsi noqdey, markaasoo uu 14 jir ahaa. Isagoo weli la gudin baa Aabbihii dhintey. Dugsigaas labaadna dugsi buu kiciyey.
Faaruq gudaha oo kooban. Carmaale waxa dariiqa diimeed ka hayey aabihiis Xaaji Cabdi-Suldaan, dariiqadaasoo. Sheekh Cumar-Faaruuq wuxuu ka dhashay qoys diineed. Halkaasi waxa uu ku dhameeyay dugsiga dhexe.
Dugsigaas labaadna dugsi buu kiciyey. Shaafici Xaaji Cabdi-Suldaan iyo Sh. Sheekh Cumar Faaruuq xaaji Cabdi Suldaan waxuu ifka kaga tagay afar xaas iyo 15 caruur ah. Tafsilr muddadaasoo uu magaalada Qallaafe xer ku ahaa. Maarso 8, JiddaSucuudiga. Hooyadiis, Caasha Sheekh Axmed Guure, isaga oo 3 jir ah ayey sueekh, aabihiisna wuxuu ka dambeeyey saddex sano. Waxa uu islamarkaa Jimcayaasha jeedin jiray muxaadaro looga kala yimaado Muqdisho iyo magaalooyinka ku hareeraysan sida Afgooye, Marka, iyo Qoryoolay.
Sheekh Cumar Faaruuq |
Xarun magaceedyada Bog Wadahadal. Waxaa kaloo jira cajalado uu sheekhu kaga hadlay cilmiga axaadiista,fiqiga,iyo naxwaha oo iyagana afsoomali ku duuban. Sheikh wuxuu ka dhashey qoys diimeed Waana Asharaaf Jannadii fardowsa allah haka waraabiyo asga iyo anagaba dhamaanteen. Naxariistii Jano alle haka waraabiyee Sheekh Cumar Faaruuq waxa uu ka soo jeeda qoys culimo ah, Meelaha uu cilmiga ka raacday Shiikha waxaa ka mid ahaa Masjidka Marwaas ee Magaalada Muqdisho oo isagoo xeroow ah uu lixdameeyadii yimid kana raacday kutubta, Shuyuuqdii soo waxbartayna waxa ka mid ahaa Sheekh Ibraahim Suuleey, iyo tafsiir sheekh cumar faaruuq Cabdikariim Sheekh Khaliif oo isagana tafsiirka uu ka bartay.
CNDV-50MT FREE DOWNLOAD
Tirada ka soo qaygasha dhagaysigiisa waxa lagu qiyaasay oo qof markiiba, iyadoo celcelis ahaan ay oo ka mid ahi haween yihiin. Qaybta Sarfiga waxaa u akhriyey wadaad awowgiis ah oo la oran jirey Xaaji Maxamuud Xaaji Cabdulle, Tafsiirka waxaa u khriyey tafsiir sheekh cumar faaruuq la dhihi jirey Sh.
Eeg Shuruudaha adeegsiga ee faahfaahinta. Qoralka waa la heli karaa tafsiir sheekh cumar faaruuq uu qabo Ruqasadda Commons ee hindisidda ee marka loo eego la midka ; waxaa soo hoos gali kara qodobo kale. Dugsiga sare waxa uu ku dhameeyay Machad-Altadaamun al Islaamiyah bil-Muqdisho oo ku oolli jirey lambar afar oo ay sucuudigu maamuli jireen.
Sheekha oo mudadan dambe ku noolaa dalka Sacuudiga waxa uu ka baxay jaamacada madiina al Munawara gaar ahaan kuliyada dacwada, ama daacinimada,waxaana Cumar faaruuq lagu tilmaamaa inuu ahaa Caalim qur’aanka aad u yaqaanay tafsiikiisa, shareecada islaamkana meel fog ka gaaray.
Sheekh Cumar Faaruuq Af-Carabi: Kutubadaas ayaa gaarey Yurubta iyo Ameerikaba. Macallinkiisu wuxuu ahaa abtigii hooyadii la dhashay oo macallin Xuseen sh. Qalabka shaqada Maxaa meeshaan la xiriiro Isbedelada la’xiriira Soo geli file bogagga khaaska ah Linkiga daaimka ah Macluumad ku saabsan Boggaan soo xigo. Reerkaasi oo uu lahaa nin la yiraahdo Olol Diinle, waxay saaxiib ahaayeen aabahiis.
Sheekh Cumar Faaruuq intii ka dambaysay burburkii Soomaaliya waxa uu waday barnaamij ballaaran oo ka kooban seddex qaybood. Xertii ka aflaxday aqoonta iyo mowlacyada sheekh Cumar Faaruuq waxaa ka mid ahaa Shiikh Nuur Baaruud oo iiga waramay aqoonti shaqsiyan uu u lahaa Marxuumka.
LIL HERB GANGWAY FREE DOWNLOAD
Cumar-Faruuq 3 goor buu dhameeyey. Waxa kaloo uu bixiyey muxaadarooyin kale oo ay ka mid yihiin kuwo dumarka u gaar ah iyo kuwo ragga u gaar ahba. Sheekha dugsigii 1aad ee Qur’aanka wuxuu galay isagoo 5 jir ah, dugsigii labaad isaga oo 9 jir ah.
Sheekh Cumar Faaruuq
Alle ha u naxariistee,Sheekh Cumar Faaruuq waxa uu lka tagay 13 carruur ah iyo afar xaas, iyadoo ubadkiisa iyo kuwa ay sii dhaleen ay gaarayaan dhowr. Misaajidii uu tafsiirka sida weyn uga aqrin jiray sheekha waxa ka mid ahaa Misaajidka Ibraahim uunlaaye ee xaafada wadajir tafsiir sheekh cumar faaruuq magaalada Moqdisho, waxaana sheekha la sheegaa in culimada kale ee Soomalida uga duwanaa xaga tafsiirka qur’aanka isagaa ahaa nin afsoomaliga aad u yaqaanay, balaaqo ama hadal deeqsiintiisuna ay ahayd mid soo jiidasho leh, ama wax fahamsiinta aad ugu fiicnaa, waxaana tusaale loo soo qaadan karaa kumanaan cajalado ah, oo Soomaali badan oon waligood shiikha arkin ay hadana cilmiga tafsiirka ka barteen maqal ahaan cajaladdaasi, kuwaasoo ku taxnaa cajaladaha misaajidda laga shido.
Dugsigaasaa isagoo 12 jir ah uu quraanka ku dhameeyey, hase yeeshee dusha kama qaban. Luqadaha kale Ku dar linkiyada. Isagoo weli la gudin baa Aabbihii dhintey.
ASHTA W 3ASAL FREE DOWNLOAD
POINTS2SHOP POINTS GENERATOR 2012 FREE DOWNLOAD
RICARDO DRUE VAGABOND FREE DOWNLOAD
KOELJO KNJIGE FREE DOWNLOAD
SDHP1020.SDD FREE DOWNLOAD
MULTITAB 6000 SIMS 3 FREE DOWNLOAD
IZIA TWENTY TIMES A DAY FREE DOWNLOAD